Kuratidzwa Kweimwe Mhando Yepfuma paBotswanaConsumer Fair 2016
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Batak (Toba) Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hungarian Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba
Kuratidzwa Kweimwe Mhando Yepfuma muBotswana
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kuratidzwa Kweimwe Mhando Yepfuma muBotswana
Kubva musi wa22 kusvika musi wa28 August 2016, Zvapupu zvaJehovha zvemuBotswana, nyika inowanika madiamond akawanda chaizvo pasi rese, zvakaratidza vanhu imwe mhando yepfuma paBotswana Consumer Fair. Vanhu vakauya pakanga paine Zvapupu zvaJehovha vakaratidzwa mabhuku anotsanangura Bhaibheri, website yejw.org, uye mavhidhiyo anoita kuti mhuri dzibatane.
Vabereki nevana vakabayiwa mwoyo pavakaratidzwa makatuni anonzi Iva Shamwari yaJehovha, ayo anoratidza mashandisiro atingaita zvinotaurwa neBhaibheri. Sezvo paine makatuni mashoma anowanika muchiSetswana, mutauro unoshandiswa nevakawanda muBotswana, vakawanda vaibvunza kuti vangawana sei mavhidhiyo acho.
Vanhu vaibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika iyi vakatora zvinyorwa zvingasvika 10 000 uye vanhu 120 vakakumbira kudzidziswa Bhaibheri. Vakawanda vakashamiswa pavakaona Zvapupu zvaiva muungano dzeChirungu uye dzechiSetswana zvichishanda pamwe chete.
Mamaneja enzvimbo yacho paakaongorora vanhu vese vakanga vaine zviratidzwa zvavo, akapa Zvapupu zvaJehovha mubayiro wekutanga.
Kuendesa Mabhuku Anotsanangura Bhaibheri Kwakasiyana-siyana muCongo